अभिभावकविहिन दिदीभाईको बनेन जन्मदर्ता « Loktantrapost
अभिभावकविहिन दिदीभाईको बनेन जन्मदर्ता
४ मंसिर २०७४, सोमबार ११:००
मेचीनगर । ‘न त आमा र बुबाको स्नेह पाइयो न त राज्यको नजरमा नागरिक हुने आशै रहयो, साँवा अक्षर पढ्दापढ्दै तँ कसको कोखमा थिइस् ? भन्ने कानुनी प्रमाण जुटाउन अहिले हामीले रुनु सिवाय केही पनि छैन । रुनु पो कसलाई सम्झेर ! न त आमाले सुन्छिन् न त बाबाले सुन्छन् ।’
यी एकमुष्ट पीडा हुन् मेचीनगर–५ सुरेन्द्रनगरका फुलमाया राई, सुनिता राई र सुमन राईको । यी नानीहरु जो आज जन्मदर्ताको कानुनी कागजको अभावमा आफ्नो भविष्यदेखि नै अलपत्र परेका छन् । जसको भविष्य निर्माणको आधार जन्मदर्ता नै पाउन सकेका छैनन् ।
मेचीनगर–५ सुरेन्द्रनगरका उनीहरु आज यही पीडामा छन् । जसले आफ्नो जन्मदिने बुबाआमा नै नभएपछि जन्मदर्ता पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु आफुलाई जन्मदर्ता बनाइदिन यतिबेला सबैसँग हार गुहार मागिरहेका छन् । एकातिर जन्मदर्ता नभएका कारण नागरिकता पाउने कुनै ठाउँ छैन भने अर्काेतर्फ उनीहरुको पढाइमा समेत मानसिक असर पर्दै गएको छ ।
‘सानैमा आमा अर्कैसँग जानु भयो, बुबाको पनि निधन भयो,’ १८ वर्षीया फुलमया राईले भनिन्–‘आज बुबा आमा नभएकै कारण हामी जन्मदर्ता पाउनबाट बञ्चित भएका छौँ । जसको बुबा आमा हुन्छन् उनीहरुको सानैमा जन्मदर्ता बनिँदो रहेछ । तर हामीले अहिलेसम्म यो अधिकार पाउन सकेका छैनौँ ।’
बालकल्याण मावि कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी फुलमाया जन्मदर्ता नबनेकै कारण अघिल्लो वर्ष विद्यालय छोडिन् । उनी अहिले चिया बगानमा मजदुरी गर्छिन् । सुनिता पनि नपढ्ने मनासयले थुप्रै समय विद्यालय आइनन् । तर, विद्यालयले अस्थायी जन्मदर्ता बनाइदिएपछि बल्ल विद्यालय आएर पढ्न थालिन् ।
बहिनी सुनिता कक्षा ९ मा पढ्दै छिन् । उनको पनि कक्षा ८ र ९ मा आवश्यक पर्ने जन्मदर्ता विद्यालयले अस्थायी रुपमा बनाइदिएर सिफारिस गरी फर्म भरिदिएको छ । तर, उनी कक्षा १० मा पुग्दा अनिवार्य जन्मदार्ता आवश्यक पर्छ । यदि उनको जन्मदर्ता बन्न सकेन भने उनको एउटै मात्र विकल्प भनेकै विद्यालय छोड्नु पर्र्ने हुन्छ । भाई सुमन मेची विद्योदय प्राविमा कक्षा ४ मा अध्ययन गर्छन् ।
२०६२ सालमा बुबा रामबहादुर राई जेल परे । बुबा जेल परेको ४ वर्षपछि आमा शुकमाया राई (लिम्बू) अर्कैसँग बिहे गरिन् । ७ वर्षपछि जेलबाट निस्केर आउँदा श्रीमती घरमा नभएपछि उनी जेठी छोरीलाई लिएर श्रीमतिलाई भेट्न भारत गए । उनले छोरीलाई श्रीमतीसँग छोडेर नेपाल त फर्किए तर कहिलै पनि छोराछोरी सम्झेर मेचीनगरमा आएनन् ।
त्यसपछि सम्पर्कबिहीन बनेका राईको गत भदौमा निधन भएको खबर आयो । गौरादहमा बस्दै आएका उनी कहिले पनि छोराछोरीको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । यतिबेला उनीहरु बुबा आमाबिहीन भएपछि मामलमा बाजेबोजुसँगको सहारामा बस्दै आएका छन् भने छोरा सुमन उनका मामा साजन लावतीसँग मेचीनगर–८ मा बस्छन् ।
‘हाम्रो मनको चाहिने छानो बुबा आमा नै छैनन्, हामीले के गर्ने ? सुनिताले रुदैँ भनिन्–‘नेपाली भएर पनि आफ्नो हक पाउन नसक्ने हामी कस्तो नेपालीका छोराछोरी ? न पढ्न नै पाइने भइयो न त आफ्नो अधिकार नै खोज्न पाइयो । विद्यालयमा फर्म भर्ने बेलामा जन्मदर्ता खोज्छ । सबै साथीले ल्याउँछन् । तर, आफ्नो आधार केही छैन कहाबाट ल्याउने ? कि हामीलाई नेपालीका छोराछोरी होइन भन्नु पर्यो कि जन्मदर्ता बनाइदिनु पर्यो ।’
सुनिताले स्थानीय निकायबाटै जन्मदर्ता बनिन्छ भन्ने कुरा बुझेकी छिन् । उनको जीवनको एउटै मात्र आग्रह आफ्नो जन्मदर्ता बनाइदिने हो । जसका लागि यो समाजले पनि सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरेकी छिन् । उनीहरुको पुख्र्याैली घर दिक्तेल हो । सानैमा गाउँ छोडेर उनीहरुका बुबा झापा आए । यतै बसोबास गरे अनि विहे पनि यतै । अहिले उनीहरुको नजिकको बंशज भएको मानिस नै छैनन् । जे छन् मामली मात्र ।
बालकल्याण माविका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधि र सर्वदलीय समितिको आधारमा प्रमाणित गरेर भए पनि राज्यले जन्मदर्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँछन् । ‘अहिले त केही समयलाई विद्यालयले सिफारिस गरेको छ,’ न्यौपानेले भने–‘तर, उनीहरु यो सानो समस्याले गर्दा जीवन्त नेपाली नागरिक हुनबाट बञ्चित हुँदैछन् । उनीहरुको भविष्यका लागि भए पनि राज्यले यो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
राज्यले जन्मको आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता वितरण गर्छ । तर जसको बुबा आमा नै हुँदैनन् उनीहरु यो सुविधा पाउनबाट बञ्चित छन् । नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिएका उनीहरुका लागि बुबा आमा नभएकै कारण बञ्चित हुनु पर्ने बाध्यता छ । राज्यले यस्ता बालबालिकाको पहिचान गरेर जन्मदर्ता बनाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र नेपाली भएर पनि आफुलाई आत्मग्लानी हुने बाटो सिर्जना हुन जान्छ ।